Geeddi-Socodka Hannaanka Somaaliland, Xaggee Hayaanku Foolka Ku Hayaa? | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Doorashooyinka, Somaliland, Warar, Wararka Somaliland
Somaliland: Guddida Doorashooyinka Qaranka Oo Soo...
Israel Oo Waraaqaha Aqoonisga Ka Guddoontay Safiirka Imaaraadka Carabta
Geeddi-Socodka Hannaanka Somaaliland, Xaggee Hayaanku Foolka Ku Hayaa?
Qaybta 2aad, Somaaliland Maxay Ka Dheefaysa Habsami U Socodka Doorashooyinka?
Waxaa hubaal ah Somaaliland in ay la timid dedaal dheeraad ah oo ay ku meel marisay doorashooyinkii ka dhacay dalka. Sidoo kale, waxaa la hubaa Allah (hufnaa oo korrey) in aanu duulna lumin tacabkooda. Sidaa darteed, habsami u socodka doorashooyinka dalkeennu waxaa uu ku dheefay magac iyo qaddarin aan kagamutaysannay caalamka. Waxaana ay dhidibada u sii aasaan dawladnimadeenna. Isla markaa, waxaa ay sii xoojiyeen nabadda iyo xasilloonida. Waxaa intaa weheliya, doorashooyinku in ay sii xaqiijiyeen ficiltan shacabku kaga warcelinayo duudsiga dheeraaday ee dalalka derisku, IGAD, Midowga Afrika iyo caalamku ay si siman u hortaagan yahiin aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaaliland.
Haddaba, xukuumad kasta oo ka dhalata Somaaliland iyo shacabkeeda, waxaa xil ka saaran yahay, horena ay u jideysteen in ay si wadajir ah bulshada caalamka ugu dawiyaan farriimo iyo baaqyo aan kala go’ lahayn. Dhambaalka Somaaliland waxaa uu xambaarsan yahay weedho ay kula gar-naqsanayaan, marna ugu quus goynayaan dunida inteeda kale. Waxaana ay cod dheer ugu tiraabayaan, “haddii aad indhaha kor nooga laliseen annagaa isu jeedna oo la’aantiin dalkayaga ka aslaaxinnay NABAD lagu soo hirto, tilmaam ku dayasho mudanna u noqota Afrika”; “Haddii aad faraha ka laabateen dhismaha qarankan iskoriska ah annaga ayaa u faro dhuudhuuban in aan yagleelno qarannimo ay hiigsato Afrika “. Reer Somaaliland iyagoo Allah talo saaranaya dulucda farriintoodu waxaa ay xambaarsan tahay odhaahda, “haddii aad dhabarka noo soo jeediseen, Allah (hufnaa oo sarrey) ayaa nagu galladay xikmad iyo deeqdiisa.”
Somaaliland waxaa ay ku baanaysaa doorashooyinka in ay geliyeen tacab durbaba laga dareemi karo. Qoddobadan dhaxalgalka ah ayaa 13kii November kaga duwan tahay kuwii ka horeeyay..
Waxaa ay ahayd markii ugu horreysay ee 3da murrashax loo goleeyo dood furan oo telifishannada af Somaaliga ku hadlaa si toos ah uga laliyeen 3-4 milyan oo qof.
Waxaa ay ahayd markii kowaad oo si baahsan ololaha doorashada loogu adeegsado degelada bulshada sida Youtube, Facebook, Twitter iyo
Waxaa ay ahayd markii kowaad ee dalkeenna ama Afrika (ka reeb Madaxweyne Nelson Mandela) ee madaxweyne xilka hayaa iskiis uga dego isagoo aan hollin xilligii 2aad.
Waxaa ay ahayd, markii ugu horreysay, dunida korkeeda oo cod bixinta lagu fuliyo farsamada cusub ee sugidda isha bu’deeda (IRIS).
Waxaa ay ahayd markii kowaad ee Wasaaradda Arrimaha Gudahu, doorashada ka hor, muwaadiniinta ku diiwaangeliso farsamooyinka isku dhafan ee qaadista raadka tobanka farood, sawirka isha bu’deeda iyo sugidda muuqaalka wejiga.
“Nidaamkan cusub, ujeedada xukuumaddu ka lahayd ayaa ahaa in la helo doorasho ka madax-bannaan hogdaloolo iyo dusdus,” sidaa waxaa yidhi Kevin Bowyer oo ku xeeldheer farsamadan cusub (biometric) kana socday Jaamicadda Notre Dame ee Maraykan. “Sidaa darteed, dadkooda waxaa ay ku diiwaan geliyeen qaab aan la dheegi karayn (tuugna ma xado), kana caaggan in la macmalo ama lagu shubto.”
Markii nidaamkan cusub loo adeegsaday diiwaan-gelinta iyo codaynta, “Somaaliland, farsamo ahaan, waxaa ay yeelatay nidaamka adduunka ugu tayada roon,” ayuu sheegay Kevin Bowyer.
Dhinaca kale, maalmahii ololaha, saddexda xisbi waxaa ay ahaayeen kuwo aan waxba isu hanbaynayn. Kor waxaa sabbaynayay aflagaado, canbaarayn la isku durayay, weerar iyo weerar celin. Waxaa la isu adeegsaday erayo beelaysan, dhaadasho iyo tolnimo la isugu tookho taaso keentay dad fara badan in ay walaac ka muujiyeen. Waxaaba laga baqe qabay doorashadu in ay dalka u horseedo colaad iyo burbur aan laga soo waaqsan karayn. Hase ahaatee, waxaa barbar socday baaqyo xidhiidhsan oo culimadu, ganacsatadu iyo waxgaradku kaga digayaeen in aan laga marin habaabin dhabbadii NABADDA ee lagu soo caanamaalay.
Inkastoo xisbiyadu u muuqdeen in ay beelaysn yahiin, runtu waxaa ay ahayd guri kasta muggiisa (householld) in loogu tegayay sokeeye, waalid iyo ubadkodii oo kala taageersanaa saddexda xisbi. Arrintaas xiisaha badan ayaa burisay hummaagga qabyaaladda ee sheedda laga arkayay.
Isla markaa, maalintii uu soo xidhmay ololahu, saddexda murrashax, iyagoo xalay dhalay ka ah, waxaa ay si wadajir ah warbaahinta horteeda uga muujiyeen xilkasnimo, rajo iyo walaatinimo ay shacabka ugu baaqeen in ay nabad ku codeeyaan. Waxaa ay qirteen in ay u loolameen hoggaaminta dalka, balse, haba yaraatee, aanay dhexdooda oollin wax colaad iyo nacayb ah. Waxaana ay ku ballan qaadeen kolba kii guulaysta in ay labada kale u daba fadhiisan doonaan talada dalka iyagoo ka midaysan u adeegidda qaranka iyo in aan dalka loo wiiqin nacabkeenna.
Sidaa darteed, shacabku waxaa ay ku codeeyeen nabad, ilbaxno iyo bisayl siyaasadeed iyadoo deero aanay deero u hirdiyin. Doorashada, waxaa kormeerayay ururo degel fadhi ah, hay’adaha xuquuqda aadami iyo ilaa 200 goobjooge caalami ah. Lixdan ka mid ah goob-joogayaasha, kana socday 27 dal waxaa soo diray dawladda Hingiriiska oo iayadu maalgelisay.
“Annagoo ogsoon in ay jireen walaacyo aan dareemaynay, haddana, ma ay ahayn kuwo wax u dhimaya geeddi socodkii guud ee doorashada. Waxaa aan aad ugu faraxsan nahay in aannu marag ka nahay doorasho, guud ahaan, koobsatay habsamida loo maareeyo mid hufan oo xor ah. Sidaa awgeed, waxaa aannu Somaliland ku bogaadinaynaa doorashadu nabadgelyada ay u dhacday; Waxaa aad hore u qaadeen tallaabo dhanka doorasho xalaal ah.” Sidaa waxaa ku tiraabay Dr. Michael Walls, madaxa kormeerayaasha oo ka socday Jaamacadda UCL, London.
Goob-joogayaashu waxa ay booqdeen 350 goobo cod-bixin iyagoo kor ka eegayay qaabka cod-bixinta iyo habkii loo tirinanayay. Komishanka waxaa ay ku amaaneen nidaamka diiwaangelinta iyo codayntu kasoo ay ku sheegeen inuu soo afmeeray khaladaad ka dhici jiray doorashooyinkii hore. Ugu danbayntii, guud ahaan, waxaa ay doorashada ku asteeyeen in ay u dhacday si nabad iyo xor ah. Warbixin dhammaystirin waxaa ay ku soo saari doona muddo lix bilood ah.
Haddaba, 19 doorasho madaxweyne oo ka qabsoomay dunida 2017 iyadoo 5 ka mid ah ay Yurub yihiin sida France iyo Germany, 4 Koonfurta Maraykan sida Chile iyo Equador, 5 Aasiya sida Iran, iyo Turkmenistan, iyo 5 Afrika ah sida DRC, Rwanda iyo Kenya waxaa sharaf iyo karaama u ah Somaaliland in ay kaga jirto kaalinta 3aad marka laga reebo France iyo German..
Saddex murrashax ee doorashadii 2017 mudanayaal Biixi, Cirro iyo Waraabe
Sidaa darteed, muran kama taagna milgaha iyo magac weyn ee dalkeennu ku dheefay doorashadan iyo kuwii ka horreeyay ee mid kasta ay lahayd saamaynteeda. Somaaliland waxaa ay si is daba joog ah u qabatay doorashooyin xor ah oo ku qabsoomay jawi nabadeed. Waxaa ay ku caan baxday qori isu dhiib iyo xil loola kala wareego si nabdoon. Taasi, waxaa ay ahayd AUN Cabdiraxmaan Axmed Cali (1991-1993), madaxweynahii dalka ugu horreeyay inuu si nabdoon ku wareejiyay xilka isagoo ku ladhay duco iyo hambalyo. AUN Madaxweyne Maxamed Ibrahim Cigaal (1993-2002) oo ajashu ku haleeshay Koonfurta Afrika waxaa si nabad iyo hadal la’aan ah xilka loogu wareejiyay ku xigeenkiisii Daahir Rayaale Kaahin (2002-2010). Madaxweyne Rayaale waxaa uu ku guulaystay doorashadii 2003 isagoo Axmed Maxamed “Siilaanyo” kaga adkaaday sideetan (80) cod oo keliya. Siilaanyo si nabad ah ayuu ku aqbalay natiijadii doorashada waxaana uu ku sagootiyay gelbis iyo duco. Sannadkii 2010 Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo oo u sharraxnaa xisbiga mucaaradka ee Kulmiye waxaa uu ka guulaystay madaxweynahii talada hayay Dahir Rayaale. Ka dibana Rayaale kalkiisa waxaa uu nabad, niyad-sami iyo duco xilka ugu wareejiyay Madaxweyne “Siilaanyo” (2010-2017).
Mudane Siilaanyo waxaa uu ku suntan yahay isagoo magac ku leh bulshada dhexdeeda inuu iskiis xilka uga degay goor uu xaq distuuri ah u lahaa inuu xilli labaad isu taago doorashada. Haddaba, Madaxweyne Siilaanyo isaguna badhtamaha bisha December waxaa uu xilka si nabdoon ugu wareejin doonaa Madaxweynaha la doortay Mudan Muuse Biixi Cabdi (Xisbiga Kulmiye). Madaxweyne MBC waxaa guusha la wadaaga raggii kula tartamay kursiga ee Mudane Abdiraxmaan Maxamed Cabdullahi “Cirro” (Xisbiga Waddani) iyo Mudane Faysal Cali Waraabe (Xisbiga UCID) iyagoo dhankooda ka oggolaaday guusha madaxweynaha cusub.
La soco Qaybta 3aad, Waa Maxay Kaalinta Doorashooyinku Ku Leeyahiin Raadinta Aqoonsiga Dalka? Xassan Cumar Horri (Machadka Dimuqraadiyadda Geeska Africa-HID) Suxufi ka faallooda arrimaha Geeska iyo Bariga Dhexe. Kala xidhiidh hassanhorri@gmail.com ama #horrimania.
#1Araweelo News Network > Commentator & Analysis > Geeddi-Socodka Hannaanka Somaaliland, Xaggee Hayaanku Foolka Ku Hayaa?